🥇 ▷ Rikoodhkan Galaxy S9 ka dhigi maayo Samsung dhoola caddeyn haddii la xaqiijiyo ✅
Rikoodhkan Galaxy S9 ka dhigi maayo Samsung dhoola caddeyn haddii la xaqiijiyo
Qaybta ugu sareysa ee Samsung ayaa la soo bandhigay dhammaadkii bishii hore ee Febraayo oo aan si diiran loogu soo dhoweyn, marka loo eego aragtida iibka. Maaha markii ugu horaysay ee aan kahadalno iibka liita ee Galaxy S9 maantana waxaan kusoo laabanay si aan kuugu soo celino, xitaa, maxaa noqon lahaa diiwaanka xun ee Samsung, haddii la xaqiijiyo.
Marka hore, waxaa muhiim ah in la caddeeyo in ereyga “hooseeyaWaa la isticmaalay u dhigma celceliska iibka ay duubtay aaladda Samsung, sidaa darteed weli waxaa jira hadallo tirooyin muhiim ah, ee ku jiraamar malaayiin. Sida laga soo xigtay wargeys Koonfurta Kuuriya, maraakiibta Galaxy S9, iyo S9 +, inta lagu jiro rubuc-labaad ee 2018 waa hoos u dhacay marka la barbar dhigo kuwa intii lagu jiray rubuc qarnigii hore. Halkaas ayay joogi laheyd markii ugu horreysay taariikhda aaladaha “Galaxy S” oo dhaca waxaas oo kale.
AKHRISO: Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8, isbarbar dhiga
Gaar ahaan, tirooyinka waxay gaarayaan 10 milyan aaladaha la soo diray marka hore afar bilood e 9 milyan ayaa la diray labaad. Sanadihii la soo dhaafay, taleefannada casriga ah ee loo yaqaan ‘Galaxy S range’ ayaa had iyo jeer lagu soo bandhigi doonaa dhamaadka rubuc qarnigii hore ee sanadka, iyo, macquul ahaan, la diiwaan geliyey iibka sare inta lagu jiro rubuc labaad ee sanadka marka la barbar dhigo kii hore.
Samsung ma leh mana xaqiijin mana diidin xogta kor ku xusan, cadeyntooda waxaa lagu bartay inay mid diiwaan gashantahay hoos u dhaca dakhliga iyadoo ay ugu wacan tahay hoos udhaca ku yimid iibinta tiradeeda sare, laakiin si faahfaahsan uma galaan. Waxaan markaa ku celinaynaa inay xogtu tahay lama xaqiijin si rasmi ah.
Via: Maamulka Android